श्रीमती महिनावारी हुँदा श्रीमानले यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमती महिनावारी हुँदा श्रीमानले यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
कार्तिक २० । महिनावारीको क्रममा महिलामा विभिन्न शारिरिक र मानसिक परिवर्तन हुने गर्दछ । यो क्रममा महिलाले आफ्नो पुरुष पार्टनरसँग सहयोग र सहानुभूतीको आशा गर्दछन् र आशा अनुरुप सहयोग पाए महिलाहरुको आधा पीडा कम हुने गर्दछ ।
महिनावारीको क्रममा के गर्ने पुरुष ?
बम्बे हस्पिटलकी गायनोकोलोजिस्ट डा. निरजा पौराणिकका अनुसार पुरुषले महिला महिनावारी हुँदा फोहोर वा असामान्य गतिविधीको रुपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन ।
महिलाले यो क्रममा किचनमा जान नहुने, खानपिनका वस्तुहरु छुन नहुनेजस्ता कुराको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । पुरुषले आफ्नो महिला पार्टनरलाई कामकाजमा सहयोग गर्ने र उनको मुडलाई बुझेर डिस्टर्ब नगर्ने ।
याे पनि पढ्नुस यी गुण भएका महिलाले पुरुषलाई चरम सन्तुष्टि दिन सक्छन ?
महिनावारी हुँदा महिलामा चिड्चिडापन बढ्ने गर्दछ । उनको मूड बुझेर आपसी सहयोग गर्नुहोस् ।
हट वाटर ब्याग दिनुहोस्
महिनावारी हुँदा पेट दुख्नु साधारण कुरा हो । हट वाटर ब्यागमार्फत पेट दुखाईबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
डार्क चकलेट खुवाउनुहोस्
तरकारी र फलफूल खुवाउनुहोस्
केरा, मेवालगायतका फलफूल र हरिया तरकारीले महिनावारीको समस्यालाई कम गर्दछ ।
महिनावारीका बेला महिलालाई कम्मर दुख्नेलगायतका समस्या हुने गर्दछ । तपाईंले हल्का हातको मसाजले उनलाई राहत दिनेछ ।
धेरैभन्दा धेरै पानी पिउन लगाउनुहोस्
आराम गर्न दिनुहोस्
तपाईंको पार्टनरलाई महिनावारी हुँदा धेरै काम गर्न नदिनुहोस् । आराम गर्दा समस्या कम हुनेछ ।
चिया–कफी वा मसालेदार खानेकुरा नदिनुहोस्
मसालेदार खानेकुरा र क्याफेनले महिनावारीको पीडालाई बढाउने गर्दछ ।
यदि रक्तश्राव अत्यधिक भइरहेको छ भने डाक्टरलाई भेट्न जानुहोस् ।
ट्याग्स: mensuration, women